Tinogona Kufadza Kuuraya Iyo Yekutarisisa Span Ngano? | Martech Zone
Chipiri, August 20, 2019 Chipiri, August 20, 2019 Douglas Karr
Edza sezvandinogona bvisa ngano yekudzikira kwekutarisa, inoramba ichitonga nenzira yakawandisa mharidzo dzekushambadzira uye hurukuro dzehurukuro. Nekudaro, ini ndakashanda nemumwe wandaishanda naye pa Ablog Cinema kuburitsa yekutanga mune akateedzana emavhidhiyo anobvisa dzimwe ngano uye zvisirizvo pamhepo… pamwe nekuunza mamwe emarangi angu kuruzhinji.
Ita yako blog mablog ipfupi, ita ako mavhidhiyo mapfupi, ita ako magirafu ave nyore… runyorwa rweanotyisa kuraira inoenderera nekuenderera. Uye iyo pfungwa yenguva yakareba haina kungoparadzirwa nevashambadzi, yakapararirawo nenhau huru, kusanganisira Magazini yenguva, ivo teregirafu, ivo muchengeti, USA Today, ivo New York Times, ivo National Post, Harvard pa US redhiyo uye mubhuku rekutarisira shoma. Ugh.
Nekutenda, imwe nhepfenyuro yakaita basa uye yakatsvaga nhema yekuti kutariswa kwevanhu kwaiperera… Iyo BBC. Munyori Simon Maybin akabata iyo yakanyorwa sosi yedhata - iyo National Center yeBiotechnology Ruzivo kuUS National Library yeMishonga, uye iyo Associated Press - uye havagone tsvaga chero chinyorwa yekutsvagisa inotsigira zviga.
Mune, zvakadaro, kumwe kutsamwa… Simon anozviona goridhe chaizvo havana pfupi kutarisisa spans, kana!
Isu tave kurarama munyika umo zvese zviri kudiwa uye chaizvo pamagunwe edu. Heano mimwe mienzaniso:
SEO - Ndatsvaga rumwe rubatsiro mangwanani ano pane imwe kodhi yandakanga ndichinyora. Ini ndakadzvanya maresults ekutanga pane peji rekutsvaga injini uye handina kuwana zvandaitsvaga. Ini ndakazonyorazve kutsvaga nenzira shoma uye pakupedzisira ndakawana iwo chaiwo iwo ruzivo rwandaida. Izvi zvinoreva here kuti nguva yangu yekutarisa yaive ipfupi nekuti ini ndaipedza nguva shoma pane yega yega mhedzisiro yekutsvaga? Kwete, zvaireva kuti zvaive zvisina basa uye ndakaramba ndichitsvaga ruzivo rwandaida kusvikira ndarwuwana. Yangu nguva yekutarisa haina kumbobvira, yega yega yakatsauka kubva pabasa riripo ... asi sarudzo dzakadaro.
Audio neVhidhiyo - Ini ndinoda kuteerera podcast uye kutarisa mavhidhiyo, asi ini handina moyo murefu wekubhururuka kana wekuzvikurudzira maspika. Ini ndichasvetuka kuteerera kana kutarisa mavhidhiyo ndichienderera mberi… kudzamara ndasvika pamhedzisiro apo mhando uye kugadzirwa zvinondipa izvo zvandinoda. Uyezve ini ndinogona kuteerera kwemaawa kana iwo musoro wenyaya uine ruzivo uye uchivaraidza. Tiri kurarama munyika ye binge-tichitarisa pa-inoda vhidhiyo… vanhu, hapana chekucherechedza nyaya pavhiki ye Game of Zvigaro zvoumambo!
AJ inoita basa rakakura rekugovana mavhidhiyo uko tarisiro yevateereri iri pakati pemakore mapfumbamwe nemakore gumi nemashanu! Kune ese nhoroondo, ma curmudgeon ekare akarwa nevechidiki kuti vateerere… uye maYoutubers aya anokwanisa kuwana mabhiriyoni emaonero emavhidhiyo anombogara anopfuura awa.
Izvo zvevechidiki zvedu zvataive tisina sarudzo uye nyore.
Saka Izvi Zvinorevei Kune Vatengesi?
Ini ndaizopokana nevashambadzi kuti vafambe nedivi rakapesana. Ipa zvakadzama zvinyorwa, matani ehuwandu, mazano anobatsira, infographics, mavhidhiyo, uye podcasts izvo zvakadzika zvinopinda mukati memusoro wekufarira kune ako tarisiro vateereri. Tinoenderera mberi tichidaro
Mutengi wese watinogadzira a raibhurari yezvinyorwa nekuti neaya madhivha akadzika anogadzira zvinoshamisa kwavari. Chokwadi… vamwe vashanyi vasina basa vanoongorora vosiya… asi tarisiro avo vari kutsvaga ruzivo vanogarisa, vanodya, vagovana, uye vagoita ruzivo rwakapihwa. Kana iwe uchida kuhwina pane zvemukati, rega kuburitsa hova dzisingagumi dzejunk zvemukati uye upe mhando yepamusoro, inodzidzisa zvemukati izvo yako tarisiro vateereri iri kutsvaga!
Tags: pfungwa yenguva yakarebaKushambadzira Vhidhiyozvisizvo